Momba anay-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Mpanamboatra matihanina ho an'ny mpanamboatra gazy sy maharitra Magnets Generator (PMG ho an'ny turbine rivotra)
QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD (QM)dia orinasa teknolojia mandroso izay mamokatra manokana sy maneno tsena (nanota sy namatotra NdFeB, Alnico, SmCo ary fivorian'ny andriambola), Permanent Magnet Generator (PMG) ary rafitra turbine rivotra. Izahay dia manana mpandraharaha any Etazonia, Australia, Italia, Uruguay, Nepal ary firenena hafa.
Miaraka amin'ny fahaizantsika ara-teknika, ny fizahanay be dia be an'ireo fitaovana andriamby maharitra, ary ny fahaizanay manamboatra singa sy ny fahaizan'ny fiangonana, manome anao vahaolana feno tanteraka izahay. Manana mihoatra ny 25 taona traikefa manome ireo vahaolana maoderina sy vahaolana famolavolana eran'izao tontolo izao, dia manolo-tena izahay amin'ny fanaterana ny haavon'ny mpanjifa avo lenta, fanampiana ara-teknika ary hanome lanja anao.
Ny ekipa Engineering-n'ny mpitarika anay dia ny fon'ny fahafahantsika manome anao vahaolana ara-magnetika izay mahafeno ary mihoatra ny fanantenanao. Ny tsirairay amin'ireo injeniera tena mahay dia manam-pahaizana amin'ny famolavolana sy ny famokarana elektromagnet sy ny singa vita amin'ny magneto, fivoriambe ary rafitra. Izy ireo dia mahay tena tsara amin'ny fifidianana sy ny eva1uation ny fitaovana ary ny singa. Efa zatra miara-miasa amin'ny mpanjifa amin'ny sehatra rehetra volavolany izy ireo, ary manampy anao mifidy vahaolana izay mifanentana indrindra amin'ny zavatra takinao, miaraka amina fahombiazana ao an-tsaina.
Avelao ny fahaiza-manaonay ara-teknika sy ny traikefantsika hitantana ny zavatra takinao rehetra. Izahay dia manondraka habe marobe avy amin'ny trano-tsofanay, manana ekipa injeniera izahay izay manolotra ny fahaizany manokana sy ny endrika teknika hamoahana ny hamaritanao manokana. Ireo santionany dia misy vidiny, ary arakaraka foana ary alefa haingana araka izay azo atao. Ny fotoana fananganana fitaovana dia matetika latsaky ny telo herinandro ho an'ny santionany kely. Alefaso anay ny mombamomba anao ankehitriny, ary hotanterahinay haingana ny zavatra takinao amin'ny famarotana lafo vidy.